Fanamboarana solosaina, Hardware & Software - Fanavaozana ny fanavaozana ny solosaina
Ny solosaina dia mila fanavaozana tsy tapaka, fikojakojana, fanavaozana ary fanamboarana indraindray koa.
Ny fikojakojana tsy tapaka ny solosaina dia midika ho fiantohana ny solosaina miasa tanteraka, ny fanesorana ireo lesoka, ny fanafainganana, ny fitazonana ny solosainao ho vaovao sy ny fiarovana tanteraka. Raha mitadidy ireo fanavaozana ara-teknolojia ao an-tsaina dia mila fanavaozana sy fanavaozana tsy tapaka ny solosaina. Midika izany, indraindray dia mila manavao ny rindrambaiko sy ny solo-sainanao ianao.
Manome anao lisitry ny matihanina izahay izay afaka manampy anao amin'ny fanamboarana sy fikolokoloana solosaina.
Ny fanavaozana ny lozisialy dia misy ny fanavaozana ny antivirus, ny windows, ny media players, ny mpamily sns ... raha toa kosa ny fanavaozana ny enti-miasa dia ny fampidirana kapila mafy hampidirina fitehirizana, ny fanavaozana ram mba hanafainganana ny solosaina, ny fampidirana ny karatra misy sary, ny fampidirana ireo mpankafy na ny fanavaozana ny CPU, sns. nohavaozina tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko sy fitaovana tsara indrindra miantoka fiasa sy filaminana mety.
Na dia heverin'ny olona aza ny fanalana ireo olana na ny famahana ny lesoka samirery, dia asaina manakarama mpanome tolotra solosaina manam-pahaizana ianao hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra ary manana serivisy tsara indrindra ianao.
Fanamboarana, fanavaozana, fanavaozana
Inona no atao hoe Solosaina?
Ny solosaina dia fitaovana ampiasaina hanatanterahana dingana maro samihafa. Hita amin'ny habe samihafa ny solosaina ary ampiasaina hanatanterahana asa samihafa izay manampy amin'ny fitsitsiana fotoana sy vola. Betsaka ny rindrambaiko misy afaka manampy amin'ny fikirakirana milamina ny lahasa samihafa.
Ny rindrambaiko dia matetika antsoina hoe fampiharana, izay manao asa mandeha ho azy ary manamora kokoa ny fizotrany. Manamora ny fitantanana izany.
mpikaroka hafa mitady ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitra ahafahanao mahazo lisitry ny matihanina izay manampy anao amin'ny fanamboarana ny fitaovan'ny solosaina sy ny rindrambaiko. Hanampy anao amin'ireo mpamily sy rindrambaiko ilaina izy ireo hiantohana ny fiasan'ny solosainao araka ny tokony ho izy.
Ny lisitry ny serivisy fanamboarana solosaina dia misy matihanina eo an-toerana sy an-tserasera izay afaka manampy anao amin'ny olana lehibe na kely amin'ny solosainao. Tsy vitan'ny hoe manome torohevitra anao izy ireo fa manome anao ihany koa ny serivisy fanamboarana sy fanavaozana mifototra amin'ny zavatra ilainao.
Azonao atao ny misafidy ireo mpanome tolotra isaky ny faritra ary azonao atao ny mampiasa ireo safidy hanakarama ireo mpanamboatra orinasa manamboatra solosaina mety ao amin'ny faritra misy anao.
Rehefa misy ny olana amin'ny fitaovan'ny solosaina dia hiteraka olana amin'ny mpamily sy ny rindrambaiko. Manampy fitaovana vaovao, rindrambaiko toy ny kapila mafy kokoa, karatra sary na karatra fahatsiarovana mba hanafainganana ny solosaina rehefa ilaina ny fanavaozana ny fitaovana enti-manara-tanana amin'ny fanavaozana rindrambaiko sasany.
Ny fitazonana ny solosainao havaozina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko sy fitaovana farany indrindra dia nanjary ilaina, indrindra rehefa misy fanavaozana ny zavatra rehetra. Ny fahazoana fitaovana sy rindrambaiko vaovao sy havaozina toy ny karatra graphique, kapila mafy, varavarankely sns. Dia mamela ny fikirakirana tsara ny asa sy ny fizotrany.
Fanamboarana rindrambaiko solosaina
Fanatsarana ny lozisialy solosaina